कलेजोमा हुने संक्रमण हेपाटाइटिस के हो, के कारणले हुन्छ? कसरी जोगिने? - दैनिक
पेट तथा कलेजो रोग विशेषज्ञ डा कश्यप स्वास्थ्य/जीवनशैली August 6, 2018
– हेपाटाइटिस ‘बि’ र ‘सि’ बाट हुने मृत्युदर एचआइभी÷एड्स, क्षयरोग र मलेरियाबाट हुने मृत्युदर भन्दा बढी छ।
– कलेजोको क्यान्सरबाट मृत्यु हुने तीन मध्ये दुइको कारण हेपाटाइटिस ‘बि’ र ‘सि’ हुन्।
– संसारभरका ३० करोड भन्दा बढी मानिसहरुलाई आफु संक्रमित भएको थाहा नै छैन।
– एकहजार भन्दा कम मूल्यमा पाइने खोप उपलब्ध भएतापनि संसारका ४८ वटा देशमा अझै बालबालिकालाई यो खोप दिइएको छैन।
– क्यान्सबाट मृत्यु हुने १२ जनामध्ये एकजना कलेजोको क्यान्सरबाट हुनेगर्छ।
– नेपालको कुल जनसंख्याको ०.९ प्रतिशत करिव दुइलाख पचासहजार मानिसहरुमा हेपाटाइटिस ‘बि’ र लगभग एकलाख तीस हजार मानिसमा हेपाटाइटिस ‘सि’ रहेको अनुमान गरिएको छ।
– संक्रमित आमाबाट यो रोग बच्चामा सजिलै सर्न सक्ने भएकाले गर्भवति भएका बेलामा हेपाटाइटिस ‘बि’ र ‘सि’को परिक्षण गर्ने। (हेपाटाइटिस ‘बि’मा यो सम्भावना बढी हुन्छ।)
– आइभि ड्रग युजर्सहरुमा यो रोग सार्ने जोखिम बढि रहन्छ त्यसैले एक आपसमा सिरिन्ज सेयर गर्नु हुँदैन।
– रक्तसंचारका क्रममा सावधानी अपनाउने र हेपाटाइटिस ‘बि’ र ‘सि’को परिक्षण गरेर मात्र रक्तदान गर्ने।
– मेडिकल उपकरण तथा औजारहरुलाई निर्मलीकरण नगरी उपचार तथा अन्य मेडिकल प्रक्रिय नगन।
– सुरक्षित यौन सम्पर्क राख्दा यो रोग सर्ने सम्भावना बढी हुन्छ। (हेपाटाइटिस ‘बि’मा यो बढी हुन्छ।)
– ट्याटु खोप्दा प्रयोग हुने उपकरण तथा औजारहरुलाई निर्मलिकरण गर्नुपर्छ। हेपाटाइटिस ‘सि’मा यो सम्भावना बढी हुन्छ।
– व्यक्तिगत सरसफाइमा प्रयोग हुने औजार तथा उपकरण जस्तैः टुथ ब्रस, रेजर आदि शेयर गर्दा यो रोग सर्ने सम्भावना बढी हुन्छ।
– एकहजार भन्दा कम मूल्यमा पाईने खोप लगाएर आफुलाई हेपाटाइटिस ‘बि’ जस्तो घातक रोगबाट सुरक्षित गर्न सकिन्छ।
– पेट तथा कलेजो रोग विशेषज्ञ डा कश्यप ग्राण्डी अस्पतालमा कार्यरत छन्